Ilmadu Waa Hadal Aan Afka Ka Imaan, Ee Si Toos Ah Ugu Imaato Qalbiga “Xikmadaha Jaceylka” | Hooyga Barbaarinta Qoyska & Wanaaga Bulshada Hooyga Barbaarinta Qoyska Iyo Wanaaga Bulshada - Www.Kobciye.Com
Published: October 19, 2015, 7:00 pm
Akhristihii inaga soo codsaday inaan kusoo celino qormadaan ka turjumeyso jaceylka iyo akhriste walbbo oo aay dhaaftay ineey ka wada faaideysan doonaan ayaanu rajyeeyneeynaaa.
In badan ayaan kasoo hadalnay arimaha jaceylka iyo xikmadaha jaceylka, balse waxaan maleeynayaa dhowr sano kadib inaan ka hadli doono arimaha naceybka waayo soomaalidii oo idil waxey noqdeen dad is wada naceb.
Runtii shabakada kobciye.com xili walbo waxey ladagaalantaaa naceybka waxey ku dadaashaa sidii loo heli lahaa qoys ku dhisan kalgaceyl dheeraad ah, hadaba isbuucaan waxaan soo qaadaneynaaa dhowr qodob oo ka turjumayo marxaladaha jaceylka.
Waqtiga nolosheyda iigu farxada badan waa kulankeena, Xasuusta nolosheyda iigu weyn waa fariimaha aad iisoo dirto, Mrugada iigu weyn dunida waa kala fogaanshaheena, Rjada iigu weyn nolosheyda waa inaan goor dhow midoownaaa, Qlbigeygana si joogto ah ayuu u duceeyaa si xiriirkeena uu ahaado mid socdo ebidkiisa,.
Qalbigeeyga adigaan kaa iibiyay kudhex nooloow waa balan weligaa waxaad ugu dhex noolaaneysaa si lacag la’aan ah, malasocotaa macaane qalbigeeyga waxaad ku iibsatay jaceyl dhab ah aan dhamaad laheyn, sidaad ugu iibsatay jaceyl hadhoow ha ugu guurin si naceyb ah, weligaa iigu dhex nooloow xinjiraha qalbigeyga.
Weligaa ha diidin qof noloshaada kusoo biiray adigoo xadkiisa siinayo, maxaa yeelay qofka wanaagsan wuxuu nasiiyaaa farxad, qofka xuna waxaan kala kulanaa inaan ku cibro qaadano, oo aqoon baa nooga saaideyso, weligaa cidna ha iskala weeynaaan.
Xulashada Saaxiibtinimada waa sida adoo Webi ama Bad ag fadhiistay oo malaay gaadayo waxaad ugu jeceshahay in shabaqa kuugu soo dhaco malaay weyn oo nafsadaada kaa fiyo, aniga shabaqeyga waxaa kusoo dhacay waa adiga weligeyna waxaan ahaanayaaa saaxiibkaaga, macaankaaga, adigana weligaa intaas ma ii ahaaneeysaaa.
Xabiibi Xusuusnoow labo sirood ayaa jaceylka lagu kobciyaaa, markii aad Qaldantahay qiro, markii aad saxantahayna iska aamus, waayo aamusnaantaada waxa dareemo qalbigeeyga, oo si toos ah ugu xiran qalbigaaga.
In badan ha hortaagnaanin miraayada markii aad labisaneyso waayo waxaan ka cabsanayaaa miraayada naftirkeeda ineey jaceyl kuu qaado quruxdaada awgeed.
Dhibicda roobka ah markii aad ku eegto indhahaada waxaad moodaa ineey aad u yaryihiin, balse ubax sugayo oo u oomanaa dhibicdaas roobka ah ubaxaasi waxey ka dhigtaa mid dhal dhalaalayo, fariinta aad iisoo dirtay waa dhowr xaraf oo kooban balse waa xarfo ku weyn nolosheyda.
Hadii aan fariin kuusoo dirin ha moodin inaan ku ilooobay, keliya waxaan doonayaa inaan kusiiyo waqti aad iigu xiiisto.
Hadii aan si saaid ah kuu xasuusto, adigana sidaas si lamid ah ma iixasuusaneysaaa, hadii aan si xad dhaaf ah kuugu xiiso adigana sidaas ma iigu xiiiseysaaa, hadii aan qalbigeyga ku siiyo, maqaadaneeysaa oo adigana kaaga ma isiineysaaa, hadii uu qalbigeyga jabo ma noqoneysaa qofka ugu horeeyo ee dhayi doono jabka soo gaaray qalbigeyga.
Ilmadu Waa Hadal Aan Afka Ka Imaan, Ee Si Toos Ah Ugu Imaato Qalbiga .
Intaan dib ugu kulmi doono xikmado lamid ah qodobadaan waxaan idin kaga tageynaa jaceyl aan salguurin iyo iska war qab joogto ah.